Lixabiso Elungiselelweyo carbon sentsimbi yokugaya izahlulo ngomatshini iindawo ngomatshini mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Isinyithi seCarbon sisinyithi sekhabhoni esinomxholo wekhabhoni oyi-0.0218% ukuya kwi-2.11%. Ikwabizwa ngokuba yintsimbi yekhabhoni. Ngokubanzi, ikwaqulathe inani elincinci lesilicon, i-manganese, isalfure, kunye ne-phosphorus. Ngokubanzi, ukuphakama komxholo wekhabhoni yentsimbi yentsimbi, kokukhona ubukhulu kunye nobukhulu bokuqina kwamandla, kodwa isezantsi seplastikhi. I-Carbon steel CNC yokugaya inoluhlu olubanzi lwezicelo kwaye ifanelekile kwiindawo ezininzi zoomatshini.
I-CNC lathes inokuqhubekeka ngokujikeleza imilo yomzimba ejikelezayo. Kwizinto zekhabhoni zentsimbi yokugaya, akukho nto ilungisiweyo, kwaye isantya esiguqukayo sokugaya sisetyenziselwa ukuhambisa okungenanto kwindawo engenanto ukusika iimilo kunye neempawu ezifunekayo. Indawo yokugaya iziko lokulungisa ilunge kakhulu ekusetyenzisweni kweentlobo zeendawo zokusebenza ezinje ngamalungu agobileyo kunye nezixhobo ezisebenzisa izixhobo. Izahlulo egobile asetyenziswa ngokubanzi endle mveliso, ezifana iincakuba injini, isinqanawa ezihambisa iinqanawa, iimveliso mveliso kunye zezindlu imilo etsobhileyo, njl Ouzhan ibonelela ngeenkonzo zokugaya zeekhabhoni zentsimbi ezenziwe ngomatshini kubathengi abaxabisekileyo.
Egqithileyo Umenzi waseTshayina u-CNC owenziwe ngesinyithi sentsimbi
Okulandelayo: I-OEM yekhabhoni yentsimbi yokugaya izixhobo zokwenza izinto
I-OEM yensimbi engenasici ye-CNC yomatshini we-sta ...